အကောင်းဆုံးအဆင်ပြေချောမွေ့သောစီးပွားရေးအရွယ်အစားရှိဟိုတယ်မွေ့ရာပေးသွင်းသူ | Rayson
Rayson စက်မှုဇုန်၊ Huasha လမ်း၊ Shishan၊ Foshan အဆင့်မြင့်နည်းပညာဇုန်၊ Guangdong, China ။ အဓိကထုတ်ကုန်များအကောင်းဆုံးအဆင်ပြေချောမွေ့သောစီးပွားရေးအရွယ်အစားရှိသော King Size Hotel Mattress Supplier ။
သက်တောင့်သက်သာသက်သာသည့်စီးပွားရေးကျသောအရွယ်အစားရှိသောဟိုတယ်မွေ့ယာသည်လူများ၏ဘ ၀ သို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်တို့တွင်လိုအပ်သည်။ ၎င်းကိုလူနေအိမ်၊ စီးပွားရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။
Rayson ကိုအဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ ၎င်းကို CAD သုံး၍ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီး CNC နည်းပညာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်၊ အာရုံခံနည်းပညာဖြင့်ထိန်းချုပ်သည်။ သက်သောင့်သက်သာစီးပွားရေးကျသောဘုရင်ကြီးအရွယ်ဟိုတယ်မွေ့ရာ
ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ရုံများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မွေ့ယာများ၊ ရက်ကန်းမဟုတ်သောအထည်များနှင့်စမ်းရေများကို ၁၀ နှစ်ကျော်ကြာထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအထူးပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဒီဇိုင်းနှင့်အညီမွေ့ရာများကိုပြုလုပ်နိုင်သည် (သို့) OEM ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင့်ကုန်ပစ္စည်းအနုပညာလက်ရာသို့မဟုတ်လိုဂိုဓာတ်ပုံများပေးရန်သင့်အားလိုအပ်သည်။
TT မှကြည့်သူ / ကြည့်မြင်သူ၊ ၃၀% Deposi နှင့် ၇၀% ချိန်ခွင်လျှာသည် ၇ ရက်အလုပ်ချိန်ရက်အတွင်းတင်ပို့သောစာရွက်စာတမ်းများ၏မိတ္တူများနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။
၁။ သင်အမှန်တကယ်လိုချင်သောအရာနှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားပါသည်။ အမှန်မှာ၊ ပုံစံ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ အမြင့်နှင့်အရွယ်အစားစသည်တို့ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
2. အကောင်းဆုံးရောင်းအားအကောင်းဆုံးနွေ ဦး မွေ့ရာသည်သင်စိတ်ရှုပ်နေနိုင်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ၁၀ နှစ်ကြာအတွေ့အကြုံရှိသောကြောင့်သင့်အားပညာရှင်အချို့အကြံပြုပါမည်။
4. ငါတို့အသိပညာကိုသင်နှင့်အတူမျှဝေခြင်းကိုဝမ်းမြောက်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သာစကားပြောပါ။
Rayson Global Co. , Ltd သည် Foshan High-Tech ဇုန်ရှိ Shishan မြို့တွင်တည်ရှိပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောတရုတ် - အမေရိကန်ဖက်စပ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Volkswagen, Honda Auto နှင့် Chimei Innolux ကဲ့သို့သောကျော်ကြားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနီးတွင်တည်ရှိသည်။ စက်ရုံသည် Guangzhou Baiyun အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နှင့် Canton Fair Exhibition Hall မှကားဖြင့်မိနစ် ၄၀ ခန့်ကားမောင်းနိုင်သည်။